Taliye ku-xigeenka ciidanka maamulka Jubbaland Max’uud Maxamed Qaalib ayaa sheegay in ciidankooda ay tiro dad ah u qabteen weerarkii shalay ka dhacay Kismaayo ee lagu dhaawacay saddex ruux oo uu ku jiro Yaasiin Nuur Gaas (Raadeer) oo ka mid ahaa mas’uuliyiinta maamulkaas.
Qaalib ayaa wuxuu intaa ku daray in Yaasiin Raader uusan hadda wax xil ah ka hayn maamulka Jubba, isagoo xusay in weerarkii lagu dhaawacay uu ahaa mid qorsheysan oo ay soo abaabushay Al-shabaab.
“Shan qof oo lagu tuhmayo weerarkan ayaan hadda gacanta ku haynaa, baaris ayaa ku socota waxaana weerarkan ku eedeynaynaa kooxda Al-shabaab,” ayuu yiri Maxamuud Qaalib.
Taliyaha ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada amaanku ay ku raad joogaan dad kale oo lagu tuhunsan yahay iney ku lug lahaayeen abaabulka iyo fulinta weerarkaas.
Shalay ayey aheyd markii kooxo hubeysan ay weerareen hotel ku yaala magaalada Kismaayo oo uu degenaa Yaasiin Raader, iyadoo dhaawiciisa isla shalay loo qaaday magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya si halkaas loogu daweeyo.
Al-Shabaab ma aysan sheeganin illaa hadda weerarkan, kamana hadlin eedeymaha loo jeediyey ee ku aadan iney ka dambeysay weerarkaas oo ahaa kii ugu xumaa ee mudooyinkan ka dhaca Kismaayo.